Toamasina : Mpianatra iray maty tao Barikadimy, 35 voatana
Nodimandry omaly ny mpianatra iray vokatry ny ratra nahazo azy taorian’ny fifandonan’ny mpianatra tao amin’ny oniversiten’i Toamasina, tao Barikadimy.
Randrianirina Herilanto Frédéric, 26 taona, mpianatra avy any Tolagnaro ary ao amin’ny lalam-piofanana ekonomia io maty omaly io. Mpianatra avy amin’ny Fitefa (avy any Antsiranana) sy ny avy any Atsimo Atsinanana ireto niady ireto, ary nisy ny fampiasana fitaovana toy ny kibay, pilotra sy antsy hatramin’ny maritoa ho an’ny andaniny sy ankilany.
Voatery nanala ny "franchise universitaire" i Horace Gatien filohan’ny oniversite, nahafahan’ny mpitandro ny filaminana niditra nanelanelana. Nampiasa baomba mandatsa-dranomaso izy ireo, nanaparitahana ny mpifanadrina.
Nodoran’ny avy amin’ny Fitefa ny tranon’ny mpianatra avy any Atsimo Atsinanana, tao amin’ny blocs roa, Libanona sy Kossovo. Nisy mpianatra telo lahy tratrany tamin’izy ireo ka naratra mafy ny roa, ary ny iray io namoy ny ainy io. Andrasana ao amin’ny EPP Morarano, ao Toamasina ilay razana.
Nifandroritana ny razana
Tany an-toerana ny Lehiben’ny faritra sy ny manam-pahefana isan-tokony ao an-toerana nangataka ny hitondrana ny razana miakatra aty Antananarivo. Nanaiky ny fianakaviana. Nitsipaka izany kosa ireo fikambanan’ny mpianatra, izay ivondronan’ny avy any Atsimo Atsinanana, Atsimo andrefana sy Anosy. Saika noteren’izy ireo handrasana tao amin’ny oniversite tao Barikadimy ny razana. Tamin’ny ora farany, dia nifanaraka ny roa tonta fa andrasana ao Morarano ihany ny vatana mangatsiakan’ity tovolahy ity. Fifandonana tamin’ny alim-pikoranana, ny sabotsy hifoha alahady no niandohan’izao fifandratrana niafara tamin’ny fahafatesana tao Toamasina izao.